- ‘मोदीका अगाडि लम्पसार पर्दा घुँडामा भ्वाङ पर्‍यो कि परेन ?’: गगन थापा
‘मोदीका अगाडि लम्पसार पर्दा घुँडामा भ्वाङ पर्‍यो कि परेन ?’: गगन थापा
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले देखाएको रबैयाप्रति आपत्ती जनाएका छन्।
संसदमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा राष्ट्रियताबारे नानाथरी कुरा लगाएको तर आज आफू नै राष्ट्रियता धरापमा पार्न लागेको आरोप लगाएका छन्।
उनले विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवाको भ्रमण र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्रमणलाई सिङ्गडा खान गएको र घुँडा टेक्न गएको रूपमा अर्थ्याएको प्रसङ्ग समेत कोट्याए। उनले भने, ‘हिजो सुशील कोइरालालाई लम्पसारवादी भन्नेले भारतको सेना नेपाल किन मगायो? संसदमा एमालेका सांसदले भारतीय सेना आउनुमा नेपालको सुरक्षा तदारुकता नभएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिको पनि थापाले आपत्ती जनाए।
संसदमा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा कमजोर भएको भारतको आँकलनले सेना आएको हुनसक्ने बताएका थिए। थापाले उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘सत्तारूढका एक सांसदले मेयरलाई सुरक्षा दिन सकेन त्यसैले भारतीय सेना आयो भने। त्यसो हो भने मैले तपाईंलाई महालम्पसारवादी भन्न पाउने कि नपाउने ? उनले विगतमा भारतका राष्ट्रपति आउँदा तामझाम गरेको भनेर एमाले नेताले लम्पसारवादी भनेको सम्झिदै मोदी भ्रमणमा ओली सरकारले देखाएको व्यवहारले महालम्पसारवादीको व्यवहार देखाएको बताए।
संसद थापाले भने, प्रदेश नं. २ का बारेमा चर्चा भएको छ । पाकिस्तानको कुनै प्रधानमन्त्री भारतको कुनै स्टेटमा जादा त्यहाँको मुख्य मन्त्रीले उभिएर यहाँ मुसलवानको उपेक्षा भएको छ भनेर कसैले भन्दा पनि भन्दैन कसैले सोच्दा पनि सोच्दैन त्यसैले यस्तो कार्य निन्दनिय छ, आपत्तिजनक छ । प्रदेश नं. २ को मुख्यमन्त्रीलाई तालिम दिने कुरा गर्नेहरुले एउटा कुरा नविसर्नुस् हाम्रो संविधानले परराष्ट्रको नीतिमा मुख्यमन्त्रीलाई चिन्दैन परराष्ट्रमन्त्रीलाई चिन्छ । माननिय परराष्ट्रमन्त्री शालिन हुनुहुन्छ तर शालिन मात्र भएर हुँदैन आफ्नो परराष्ट्रमन्त्रीलाई तालिम दिने भनेर भन्ने कि नभन्ने ? सोध्न पाउने कि नपाउने ?
‘‘नाकाबन्दीका बेला एमालेका युवा भारतीय दूतावासका अगाडि प्रदर्शन गर्न पाउने, तर आज कसैले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा ब्यानर राख्न नपाउने ? कोही पत्रकारले प्रवेश गर्न नपाउने ? कसैले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न नपाउने ? यो कस्तो लम्पसारवाद हो ? यो कस्तो चाकडी हो ? यो सरकारको कस्तो व्यवहार हो आफ्ना नागरिकप्रति ?’’ आफूले गर्दा पुण्य, अरुले गर्दा पाप ?’’
थापाले नाकाबन्दी बिर्सेको छैनौं भन्नेहरूमाथि भएको सरकारको धरपकडबारे पनि आपत्ती जनाए। उनले विगतमा एमाले नेताहरूले नाकाबन्दीलाई लिएर आन्दोलन गर्न मिल्ने तर आज नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं भन्नेलाई धरपकड गर्नु लम्पसारवाद र चाकडी भएको बताए। उनले भने, ‘हामीले नाकाबन्दी बिर्सेको छैन भन्न नपाउने? यो कस्तो लम्पसारवाद हो यो कस्तो चाकडी हो? ‘मोदीका अगाडि लम्पसार पर्दा घुँडामा भ्वाङ पर्‍यो कि परेन ? मैले सोध्न पाउने कि नपाउने ? हिजो अरुलाई कुरी कुरी गर्नुभएको थियो आज आफैँ नांगै हिँड्नुभएको छ।’ थापाले परराष्ट्र मामिलामा नेपालमा एकै धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।